सहिद, संविधान र असंवैधानीककदम ! - हाम्रो जनकपुर
महोत्तरीमा दुई ब्यक्तिको शव फेला
सिरहामा एकजना कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ
सिंचाईकाे व्यवस्था नगरेकाे कारण किसानहरु चिन्तित
सहिद, संविधान र असंवैधानीककदम !
२०७७ फाल्गुन २, आईतवार ०८:०५
अनिल बस्नेत/महोतरी । सदा भन्दा यो बिहानी अलि फरक थियो। दोबाटे खहरे खोलाको डिलमा अबस्थीत फुसको त्यो झुप्रोमा पनि गर्विलो रौनकले छोएको लख सजिलै काट्न सकिन्थ्यो ।
“उता झुप्रो भित्रको स्थिती भने बडो कहाली लाग्दो थियो। तर आज सबै ती स्थितीलाई त्यहाँका बासिले बिर्सिए झैं लाग्थ्दथ्यो।